Gurman haana tariro mune tembiricha sensor yeApple Watch Series 8 | Ndinobva ku mac
Runyerekupe runouya nekuenda sezvo mhepo ichivhuvhuta uye izvo zvaive zvakanyanya kupfuura zvaigoneka masvondo mashoma apfuura hazvichagoneke. Izvi ndizvo zvinoitika nerunyerekupe nezve Apple Watch Series 8 nema sensors ayo akasiyana, Mark Gurman, zvino anoti mutsamba yake "Simba On" kuti mudziyo mutsva we Apple haizo wedzera iyi tembiricha sensor muchizvarwa chinotevera.
Gurman pachake, pamwe nevamwe vanoongorora zvigadzirwa zveApple, vakayambira kuti zvaigoneka kubatanidza iyi tembiricha sensor mune inotevera-chizvarwa smart wachi. Ikozvino inoti sensor iyi hazviuye kwemakore mashoma.
Iyo Apple Watch Series 8 "yezvakajairika"
Uye ndezvekuti kana isu tikateerera kune yekutanga kuvuza uye nerunyerekupe rwegore idzva iri 2022 zvinoita sekunge Apple smart wachi ichave yakanyanya kujairika maererano nemashandiro, shanduko dzakawandisa maererano nemasensor hazvitarisirwe uye ndizvo zvakanyanya. zvichida kuti isu gara kure nekusvika kwekushisa, BP uye ma sensors eropa. Iyo yekupedzisira isu tinotenda ichave bhomba apo Apple inogona kuwedzera, nekuti ikozvino ichave nguva yekushivirira.
Pakutanga gore rino, Apple yakaratidzwa kuve mumwe wevatengi vakuru veBritish kambani Rockley Photonics, femu iyi inogadzira non-invasive optical sensors kuti ione maitiro akawanda ehutano ane chokuita neropa, kusanganisira kuwedzera kweropa, shuga yeropa uye mazinga edoro reropa. Izvi zvinoreva here kuti tichava nemasensa aya paApple's wrist zvishandiso munguva pfupi? Hameno, zvese zvinoratidza kuti kwete, asi ichokwadiwo kuti iri kugadzirwa nekudaro zvinokwanisika kuti makuhwa ekuuya kwaro anoramba akahwanda gore rino nezvinotevera kusvika zvaziviswa zviri pamutemo.
Tinovimba kuti kusvika uku hakutore nguva yakawandisa asi maererano naGurman, isu tinofanirwa kuzvishongedza nemoyo murefu kuti tione rudzi urwu rwema sensor akabatanidzwa uye anoshanda zvizere muApple Watch.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Gurman haana tariro nezve tembiricha sensor yeApple Watch Series 8
iCloud, Mapikicha, uye mamwe maApple Cloud masevhisi ane malfunctions